Su'aalaha - gomymobi.com
109 luqadaha la taageeray
Waxaan isku dayeynaa inaan ku caawinno fahamka xalalkeena si dhakhso leh
In kasta oo aan aaminsanahay inaad adigu tahay tijaabooyinka wanaagsan ee adeegsiga xalalkeenna ugu fiican, laakiin mararka qaarkood haddii aadan awoodin inaad wax fahamto, fadlan ku soo hel su'aalaheenna sida joogtada ah loo weydiiyo ee hoose; oo xusuusnow inaan markasta halkaan u nimid inaan ku caawinno.
Su'aalaha Badanaa La Is Weydiiyo?
Su'aalahaagii halkan ayaan kaaga jawaabey
Miyaan ku heli karaa xawaare ballaadhan oo xad-dhaaf ah bogagga internetka
Hubaal! Waxaan damaanad qaadaynaa arrintan.
Miyaan isticmaali karaa SSL oo leh domain caadadiisu tahay?
Maya! Waqtigaan la joogo ma taageerno SSL laakiin dhowaan waan sameyn doonnaa.
Haa! Kaliya iibso shahaadadaada SSL ka dibna u isticmaal boggaaga gaarka ah.
Ma heli karaa bogag aan xadidnayn oo websaydh ah?
Haa! Madalkeenna waxaa loogu talagalay inay kuu oggolaato inaad abuurto bogag aan xadidnayn, kaliya u abuur sida aad jeceshahay.
Miyaan ku dari karaa waxyaabo cusub bogagga shabakadda?
Waan ka xumahay laakiin MAYA! Ujeedadayada madal ayaa ah inay dadka ka caawiso inay si deg deg ah u abuuraan degel ganacsi oo leh mowduucyada websaydhka la jecel yahay ee la dhisay, waxay u baahan yihiin oo keliya inay soo xushaan mid ka mid ah mawduucyada ka dibna ay bilaabaan dhismaha degel websaydh hal abuur leh; uma baahna inay ka fekeraan sida loo abaabulo walxaha si ay u qurxiyaan bogagga, waa jahwareer haddii aysan haysan waqti badan.
Haa! Hadda waxaad ka abuuri kartaa degel meel xoq ah leh Element dhiseheenna xoogga badan.
Miyaan kala soo bixi karaa websaydhyo si buuxda loo abuuray?
Haa! Marka laga soo tago daabacaadda boggaga internetka ee la abuuray sidii degmooyin / sub-domains u gaar ah, ama lagu soo dejinayo FTP, waxaan sidoo kale kugu taageereynaa inaad soo dejiso degellada si buuxda loo abuuray.
Miyaan ku yeelan karaa mawduuc gaar ah degelkayga?
Asal ahaan, faafreeyahayagu waa haa! Waxaad u baahan doontaa inaad soo dejiso mawduucaaga gaarka ah, ka dibna u dejiso inuu yahay mid gaar ah oo loogu isticmaalo bogaggaaga oo keliya.
Sidee loo beddelaa Cinwaanka Bogga Cinwaanka?
Cinwaanka Bogga Bogga waxaa lagu beddeli karaa iyada oo la adeegsanayo menu-ka Page Settings ee goob kasta oo ku jirta Qaabka Tifaftirka
Sidee loo tilmaamayaa cinwaankeyga gaarka ah bogga la abuuray?
Kaliya waxaad ku tilmaami kartaa domain caadada u ah Tafatirka Qaabka, ka dib markii aad soo gasho boggaaga caadada ah, waa inaad tagtaa diiwaan-hayaha domain ka dibna abuuraa diiwaanka CNAME & tilmaanta boggayaga www.gomymobi.com
Suurtagal ma tahay in lagu daro baloog dukaanada iyo bogagga internetka?
Maya, xalkaan lama horumarin doono mustaqbalka dhow. Fadlan isticmaal nidaam blogga dibedda ah sida Dhexdhexaad ka dibna ku dar iskuxirka baloogga websaydhkaaga ama dukaankaaga.
Bogag la'aan, ma yeelan karaa degel ganacsi ama dukaan?
Haa! Way fududahay, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad u isticmaasho meerayaasha-hoosaadyada websaydhkaaga ganacsiga iyo dukaamada. Markaad horeyba u laheyd xayeysiisyo gaar ah, oo aad u xilsaarto websaydhkaaga & dukaamadaada, ka dib wax waliba si habboon ayey u shaqeeyaan iyadoon waxyeello ama lumin lahayn
Miyaan heli karaa dukaan lacag la'aan ah oo internetka ah weligood?
Hubaal! Waxaan ku siineynaa qalab iyo xalal aad dunida uga iibiso wax soo saarkaaga hal-abuurka ah BILAASH intaad nooshahay. Laakiin sababta oo ah xaddidnaanta ku saabsan ilaha, waxaa laga yaabaa inaad kaliya haysato 10 shey oo leh akoonno bilaash ah.
Ma ku iibin karaa wax boggeyga internetka?
Haa! Ka dib markii aad sameysay degel, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad dukaan u furto ka dib bilow inaad iibiso wax kasta oo aad haysato.
Alaabooyinka looma soo bandhigo sida dalbashada nooc?
Waa inaad ku qortaa tixraaca dalabka alaabta marka ugu horreysa Nidaamka Badeecadaha.
Sideen toos ugu xiraa domain-keyga dukaanka?
Dukaanka wuxuu u shaqeeyaa sida galka hoose ee domainka, sidaa darteed macquul maahan inaad ku lifaaqdo domain si toos ah wax looga iibsado.
Sideen u badali karaa tirada shayada ku jira bogga wax soo iibsiga?
Kaliya waad ka beddeli kartaa tirada bogga gaadhiga, bogga lacag-bixinta ayaa ah meesha lagu dhigo kaliya amarrada.
Sideen ula socon karaa amarradayda la i saaray?
Ka dib markaad amarada si guul leh u dhigto, waxaa laguu wareejin doonaa bogga dalabka si aad u bixiso & ula socoto amarka dhowaan la abuuray, waxaad sidoo kale ka helaysaa iskuxirahan emayl loo diray emaylkaaga emaylka ah.
Sidee loo beddelaa / loo hagaajiyaa xiriirka fiidiyowga ee mawduucyada goobta?
Waxyaabaha gaarka ah ee aan ku beddeli karin tifaftireyaasha ama koodhka ilaha, waa inaad ku abuurtaa aag mawduucyada-setings.php ee mawduuca goobta ka dibna isticmaal PHP si aad uga shaqeyso qiimaha la beddelay.
Waa qaylodhaan aan ubaahanahay inaan cusbooneysiiyo qorshahayga?
Waan ka xumahay tan, laakiin astaamaha iyo xalalka qaar ayaa loogu talagalay xubnaha lacagta la siiyay, fadlan kor u qaad qorshahaaga si aad u adeegsato qalabkan. Qorshayaasheena waa kuwo aad u jaban, nala soo xiriir wixii faahfaahin dheeraad ah.
Haddii aad isticmaaleyso koontada demo, markaa astaamo badan oo muhiim ah ayaa naafo ah, fadlan iskuday xisaabaadka dhabta ah, gebi ahaanba waa BILAASH isdiiwaan gelin.
Farriintani waxay u muuqataa inay ka digtoon tahay in koontadaadu dhacday, fadlan cusbooneysii si aad u sii wadato adeegsigaaga.
Farriintani waxay umuuqataa inay ka digtoon tahay inaadan hoos u dhigi karin koontadaada si aad u hoos u dhigto qorshooyinka, sababtoo ah madalku ma go'aansan karo goobaha / dukaamada la tirtiro. Marka waxaad cusbooneysiin kartaa oo keliya qorshahaaga hadda ama aad u cusbooneysiin kartaa qorshooyinka sare.
Ma abuuri karaa qorshayaal gooni ah goobta iyo dukaan?
Waan ka xumahay tan, laakiin ma jiro qorshe gooni ah oo loogu talagalay goobta ama dukaanka, kaliya qorshee isku darka goobta & dukaanku waa la taageerayaa, waxaad daari kartaa ama damin kartaa oo keliya xalalka dukaanka iyo dejinta xaddidaadda ilaha goobta & keydinta.
Waxaan halkaan u nimid inaan kaa caawino inaad deg deg u dhisto websaydhadaada ganacsi, si fudud & waxtar leh; sidoo kale waxay ku siinayaan xalka ugu fiican ee ugu fiican si aad adduunka ugu iibiso wax soo saarkaaga hal-abuurka ah komishan bilaash ah, waxaad kasbataa dhammaan faa'iidooyinka.
Baadh mawduucyada websaydhka
Ku dar alaab
Waxaan u adeegsannaa noocyo kala duwan oo buskud ah si aan ugu hagaajino khibradaada boggayaga internetka. Waxaan u adeegsannaa cookies si aan u hagaajino khibradaha isticmaalaha, iyo falanqaynta taraafikada degellada. Sababahan awgood, waxaan la wadaagi karnaa macluumaadka isticmaalka boggaaga la-hawlgalayaashayada gorfeynta. Waad oggolaan kartaa adeegsiga teknoolojiyada noocan oo kale ah adoo xiraya ogeysiiskan, adigoo la falgalaya xiriiriye kasta ama badhan ka baxsan ogeysiiskan ama sii wadista bogagga kale.